Nduzi: Otu Organic Marketing Platform maka Enterprise MarTech Stack | Martech Zone
Anyị nọ n'ọgbọ ozi buru oke ibu. Site na data juputara oge niile, ọbụlagodi ndị na-ere ahịa dijitalụ kachasị njọ nwere ike ịda mbà. Don'tchọghị azịza nye ajụjụ ọ bụla - naanị ị chọrọ igodo iji kpughee uru gị na mkpọsa na mmemme gị. Need chọrọ ọrụ nke ahaziri, inweta ma rụọ ọrụ nke ọma.
Na-ewebata Newzọ Ọhụrụ iji chọpụta ma kesaa nghọta na ohere dị na Searchlight Conductor
Conductor na-ekpughere usoro ohuru nke atụmatụ maka ikpo okwu Onye na-eduzi anyị. Ikpo okwu na-enye ụzọ a na-enweghị atụ iji chọpụta ihe ndị ahịa na-achọ n'ịntanetị site na ụlọ ọrụ na-eduga data ọchụchọ ọchụchọ, ezigbo oge itinye aka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ngwaọrụ na-enweghị ntụpọ maka ịmepụta ọdịnaya bara uru nke na-enye azịza ma na-ewulite ntụkwasị obi na ndị ahịa.
Onye nduzi SEO kachasị arụ ọrụ, Explorer, bụ ụlọ ọrụ nkwụsị maka nyocha n'ime ebumnuche ndị ahịa, isiokwu ọchụchọ, isiokwu, echiche ndị na-ege ntị, nghọta mmadụ, na ọgụgụ isi asọmpi. Site na ikpughere isiokwu ndị nwere nnukwu ọchịchọ, Explorer na-enye gị nghọta ka mma banyere ndị na-ege gị ntị: ihe ha na-achọ taa, na ihe ha ga-achọ echi. Enwere ọtụtụ ihe ịtọpụ ebe a, yabụ Conductor na-akwadebe Explorer na atụmatụ ọhụụ ọhụụ na-eme ka ahụmịhe ahụ ka mma.
Explorer na-etinye ndị na-ere ahịa n'oche onye ọkwọ ụgbọala na nzacha ahaziri iche na nke ọhụụ maka ahụmịhe ahaziri, nyocha na akara mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-eme ka mkpa ndị ahịa mara yana nkowa ọdịnaya dị n'ime ikpo okwu nke na-agbanwe nghọta, ohere, na ọdịnaya.
Ihe nzacha ahaziri iche na nke a ga - ekekọrịta: Data bara uru dị ka ike i nyocha ya site na oghere azụmaahịa gị. Site na ahụmịhe mmekọrịta mmekọrịta ọhụụ, ị nwere ike ịmepụta ma chekwaa usoro nhazi nke ejiri mee ihe ugboro ugboro, ọbụnakwa ịkekọrịta ndị nzacha gafee otu gị.
Ngosipụta nke Ọhaneze maka Keywords niile: Mụta ihe onye ahịa na-achọ bụ naanị akụkụ nke foto a. Iji ghọta n'ezie ọchịchọ ndị ahịa, ị kwesịrị ịma mgbe ha na-enyocha ya na ihe kpatara ya. Mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe gị nwere ike inyere gị aka ịkwadebe kalịnda kachasị nke ọma tupu oge eruo.
Jumpstart Usoro Ọdịnaya Gị na Nkọwa Nkọwa Ọdịnaya: Nkọwa na-enye ndị na-ere ahịa ikike ịme mkpebi ka mma ma jiri ozi bara uru rute ndị na-ege ntị anya. Nchịkọta Ihe Ndị Na-eduzi Conductor na-agbasa, na-enye gị ohere mgbanwe karịa iji mepụta mkpirisi ederede na-eme ka nghọta nwee nghọta n'ogologo gafee Explorer.
Nghọta kachasị mma bụ naanị dị ka ikike gị ịmepụta ọdịnaya bara uru ma kesaa mmetụta ahụ. Onye na - eduzi Conductor na - enyezi ụzọ dị mfe iji soro, tụọ ma kesaa mmetụta azụmaahịa n'etiti ndị otu na ndị metụtara ya, yabụ na ị nwere ike ịnweta - ma nọrọ - n'otu ibe.
Ebe ọrụ a ma ama: Mepụta ma kpoo ebe ọrụ bara uru - na-agbanwe agbanwe, na-arụ ọrụ mkpesa na ntanetị - dị ka ọkacha mmasị maka ịkekọrịta ngwa ngwa ma dị mfe gafere otu, n'ime ikpo okwu ma ọ bụ site na email.
Azịza Box Box nke nwere ọgụgụ isi: Featured snippets (ma ọ bụ igbe azịza) na-anọchi anya ohere maka ika gị ka ọ pụta ìhè na Google. Conductor na-emewanye nke anyị azịza igbe nwere ọgụgụ isi na Insight Stream, akụkọ ntanetị ahịa anyị na-arụ ọrụ. Nọgide na-agbanwe na mgbanwe nke igbe azịza gị, yabụ na ị gaghị echefu nghọta ma ọ bụ ohere iji nweta ụlọ na Google.
Bufee ozi abụghị naanị nsogbu nye ndị ahịa; ọ bụ ihe esemokwu maka ndị ahịa azụmaahịa dijitalụ. Ebumnuche nke onye ndu bụ ịmekọrịta ahịa ma anyị kwenyere na ụzọ ị ga-esi mee nke ahụ bụ ịghọta mkpa ndị ahịa ma nye ndị na-achọ azịza ntanetị uru. Ọnọdụ ndị nduzi nke ngwaahịa SEO na-ewepụta nghọta miri emi banyere ndị ahịa nke ụdị ọ bụla, na ụlọ ọrụ ọ bụla ma na-enye ndị ahịa ume ime ihe.
Seth Besmertnik, Onye ndu CEO & Co-guzobere
Hazie Ihe Omume nke Onye Nduzi
Tags: eduzionye na-enyocha iheEbumnuche Searchlight Conductorobere ọdịnayaahia ahian'elu ikpo okwuSeth Besmertnikisiokwu mmadụ